‘सबैबाट सद्भाव पाएको छु’ « Loktantrapost
‘सबैबाट सद्भाव पाएको छु’
गत भदौ ५ गते उद्घाटन भएको विर्तामोडको ‘होटल हिकोला हेरिटेज’ले स्थापनाको गौरवमय तीन महिना पूरा गरेको छ । ‘हुने विरुवाकोे चिल्लो पात भने झैँ’ यसले होटल व्यवसाय जगतमा दिएको उत्कृष्ट एवम् स्तरीय सेवा जसरी प्रशंसायोग्य छ, स्थानीय उपभोक्ता, विशिष्ट राजनेता र विदेशी पाहुनाबाट पाएको सद्भाव त्यसैगरी लोभलाग्दो छ । यो सफलताका पछाडि होटलको नेतृत्व र कुशल व्यवस्थापनको योगदान रहेको छ । होटल हिकोला हेरिटेजका अध्यक्ष देवीभक्त श्रेष्ठसँग यही सेरोफेरोमा लोकतन्त्र पोस्टले गरेको ताजा कुराकानी प्रस्तुत छ–
होटल व्यवसायमा लाग्दा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ ?
मैले यस अघि गर्ने व्यवसाय पनि समाजकै सेवाका लागि थियो । अहिले होटल हिकोला हेरिटेज सुरु गर्दा थप जिम्मेवारीका साथ समाजको सेवा गर्ने अवसर पाएको अनुभूति भइरहेको छ । नेपाल विश्वकै सुन्दर र रमणीय मुलुकमध्ये अग्रपङ्तिमा रहेको छ । घुम्नकै लागि बर्षेनी लाखौँ विदेशी पाहुना आउनु हुन्छ । अचेल आन्तरिक पर्यटन फस्टाउँदो अवस्थामा छ । देशभित्रकै आन्तरिक हुन् वा विदेशबाट आउनु हुने वाह्य पर्यटक नै किन नहुन्, उहाँहरूको आरामदायी बास, खाना र सुविधाका लागि काम गर्न पाउँदा म गर्व गर्दछु ।
तपाई कलर ल्याव र ट्राभल्स चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो । होटल व्यवसाय गर्ने सोच कसरी आयो ?
मैले अघि नै भनिसकेँ, हिकोला कलर ल्याब र अनुपमा ट्राभल्स दुईवटै पर्यटन व्यवसाय हुन् । होटल व्यवसाय पनि पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित छ । यी
सबै व्यवसाय एकअर्काको परिपूरक भएकाले होटलतिर आकर्षित भएँ ।
कस्तो छ होटलको अवस्था ?
होटल व्यवसाय फस्टाउन मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र आर्थिक गतिविधि सन्तोषजनक हुनु आवश्यक हुन्छ । बन्द हड्ताल, चन्दा चिठ्ठा र असुरक्षाले यो व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अहिले नाकाबन्दीका कारण उत्पन्न इन्धनको अभावले होटल व्यवसाय प्रभावित भएको छ । यतिसम्मकि राजधानीका कतिपय होटल खाना पकाउने ग्यास नपाएर बन्द समेत हुन पुगेका छन् । राज्यले पर्यटन प्रबर्धनसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको होटल व्यवसायलाई खाना पकाउने ग्यास समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । मुलुकको परिस्थिति जति नै प्रतिकूलता भए तापनि होटल हिकोला हेरिटेजले आफ्ना पाहुनाको सत्कारमा कुनै कमी आउन दिएको छैन । होटलमा आउने पाहुनाले कुनै किसिमको अभाव महसुुस गर्नु नपरोस् भनेर हामी सचेत छौँ ।
होटल हिकोला हेरिटेजले कस्तो रेस्पोन्स पाइरहेको छ ?
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपाशुर शेर्पाले गत भदौ ५ गते होटलको उद्घाटन गर्नु भयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओली, मुटु विशेषज्ञ डा.भगवान कोइराला, एशियाका चर्चित सर्जन डा. वसन्त पन्त लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वले हाम्रो होटल हिकोला हेरिटेजको सेवा लिएर प्रशंसा गर्नु भएको छ । बिर्तामोडजस्तो ठाउँमा पारिवारिक वातावरणमा खानपिन गर्न र बसोबासका लागि एकै छानामुनी सबै सुविधा नभएकाले त्यो सबैको परिपूर्ति हामीले गरेका छौँ जस्तो लागेको छ । तीन महिना खासै धेरै समय होइन । तर यति छोटो अवधिमै हामीले सफलताको फड्को मारेका छौँ । होटल हिकोला हेरिटेज अहिले उत्कृष्ट ब्रान्ड भएको छ । मैले सबैबाट सहयोग पाएको छु । मेरा शुभचिन्तक, यहाँका सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि, विभिन्न पेशागत साथीहरू जसलाई मैले ३० वर्षदेखि फोटोग्राफीमा सेवा दिँदै आएँ, उहाँहरूबाट मैले जुन सद्भाव पाउँदै आएको छु, त्यो सद्भाव अहिले अझै वृद्धि भएर गएको मैले पाएको छु ।
होटल हिकोला हेरिटेजका विशेषता के के छन् ?
एउटा सुविधा सम्पन्न होटलमा हुनु पर्ने सबै सुविधा यहाँ उपलब्ध छ । हामी पाहुनाको सेवा, सुविधा र सन्तुष्टिलाई नै हाम्रो सफलता मान्दछौँ । हामीकहाँ अनुभवी र दक्ष कुकहरू छन् । सबै प्रकारका परिकार हामी पस्किन्छौँ । यहाँ धुम्रपान, मदिरापानका लागि छुट्टै वारको व्यवस्था छ । वर्थ डे पार्टी, सेमिनार, साङ्गीतिक कार्यव्रmम गर्नका लागि हामीसँग दुईवटा हलको पनि व्यवस्था छ ।
ठूलाबडा मात्र आउने होटल हो कि सर्वसाधारण पनि जान सक्छन् ?
आजसम्म मलाई सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूले साथ दिनु भएको छ । हामीले होटलमा जसरी लगानी गर्यौँ, जसरी सुविधाहरू प्रदान गर्यौँ, त्यस अनुपातमा हामीले महँगो गरेका छैनौँ । जे जति खानाको मेन्युहरू छ, सामान्य होटलकै जस्तो गरेर हामीले राम्रो वातावरणमा खुवाइरहेका छौँ । कुनै त्यस्तो भ्रम छ भने आम उपभोक्तालाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि हामीले अन्य सामान्य होटलमा भएको रेटभन्दा महँगो लिएका छैनौँ । महँगो लिने हाम्रो मनसाय पनि छैन । विर्तामोडका धेरै उपभोक्ताहरू होटल हिकोला हेरिटेजको मोमो लगायतका परिकार घरघरमा लगेर खान थाल्नु भएको छ । हाम्रा परिकारहरू उपभोक्ताका रोजााइ र बजारका स्पेशल व्रान्ड बन्न थालिसकेका छन् । आम उपभोक्ता र ठूला ओहोदाका व्यक्तिहरू हाम्रा लागि उत्तिकै सत्कारयोग्य हुनुहुन्छ ।
विदेशी पर्यटकको आगमन कत्तिको भयो ?
यो तीन महिनाको अवधिमा हामीले धेरैवटा देशका नागरिकको सेवा गर्न पाएका छौँ । आजसम्म स्वदेशी, विदेशी जेजति पाहुनाहरु आउनुभएको छ, उहाँहरुलाई हामीले सन्तुष्ट बनाउने प्रयत्न गरेका छौँ । धेरै पाहुनाहरू राम्रो र स्तरीय होटल रोज्ने व्रmममा होटल हिकोला हेरिटेजमा आइपुग्नु भएको छ । अमेरिका, वेलायत, फ्रान्स, जर्मन, नाइजेरिया, साउदी, मलेशिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, जापान, अस्टे«लिया लगायतका थुप्रै मुलुकका पाहुनाले हाम्रो आतिथ्य पाउनु भएको छ ।
नाकाबन्दीले अप्ठेरो परेको होला नि ?
हामीले होटल उद्घाटन गरेको तीन दिन पछिदेखि नै मुलुकले नाकाबन्दी व्यहोर्नु प¥यो । परनिर्भरता हटाउने तर्फ अहिल्यैदेखि नसोच्ने हो भने हाम्रो भावी पुस्ताले झन् दुःख झेल्नु पर्ने छ । आज मुलुकको हवाई तथा स्थल यातायात प्रभाभित छ । विद्युत लोडसेडिङको सदावहार मार खेप्नु परिरहनु परेका बेला भूकम्प र नाकाबन्दीले अवस्था झन् जर्जर बनेको सर्वविदितै छ । के सत्य हो भने मुलुकलाई आर्थिक रुपले समृद्ध बनाउन पर्यटन व्यवसाय दर्विलो आधार बन्न सक्छ । अहिलेको अप्ठेरोलाई मनन् गरेर हामी सबैले आत्मनिर्भरताको मार्गमा हिँडौ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छु ।
होटलको उद्घाटनमा तपाइँले सबैलाई बोलाउनु भएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ । सबैलाई कसरी समेट्नु हुन्छ ?
यो कुरामा म आफैँ असाध्यै दुःखी छु र चिन्तित पनि छु । शुन्य अवस्थाबाट व्यवसाय सुरु गरेको एउटा इतिहास बोकेको व्यक्ति हो म । उद्घाटनमा सकेसम्म मैले सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि मैले पठाएका निमन्त्रणा कार्डहरू सबै मित्रहरूमा, सङ्घ संस्थामा, स्कूल, कलेज, हस्पिटल, मेनपावर लगायत सबै क्षेत्रमा पुग्न सकेन होला । मैले सबै मित्र तथा सङ्घ संस्थाप्रति उच्च सम्मान र सद्भाव राखेको छु । तीन महिनाको दौरानमा सबैबाट पाएको सद्भावले म उत्साहित पनि छु ।
होटल सुरु भएपछि कलर ल्याव व्यवसाय छाड्नु हुन्छ कि ?
मैले फोटोग्राफी उद्योग सुरु गरेको छोटो अवधिमै धेरै फड्को मार्यो प्रविधिले । मैले यो व्यवसाय सुरु गरेको अवस्थामा हङकङ र अन्य देशबाट फोटो प्रिन्ट गरेर नेपाल ल्याइन्थ्यो । फोटो धुने प्रविधि नेपालमा थिएन । पछि डार्क रुमबाट ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट सुरु गरेर एनालग हुँदै डिजिटल र डिजिटलबाट पनि अहिले चाहिँ धेरै प्रविधिहरू परिवर्तन भएर व्यावसायिक रुपमा धेरै ठूलो उद्योगको रुपमा रहन नसक्ने अवस्था छ । तर पनि मेरो मातृपेशा भएकाले कलर ल्याव व्यवसाय र कलर ल्याव उद्योगलाई मैले निरन्तरता दिइरहेको छु । दिइरहने छु ।
अन्त्यमा, भन्नै पर्ने केही कुरा छुटेको छ कि ?
सकारात्मक सोच र सद्भाबबाट नै हामी समाजको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने विचारमा म दृढ छु । सबै पेशा र व्यवसाय एक अर्काका परिपूरक हुन्छन् । सबैलाई सबैको खाँचो हुन्छ । हामीले अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितिमा होटल व्यवसाय सुरु गरेका थियौँ । तर तपाई मित्रहरू, शुभचिन्तकहरू, विभिन्न पेशाका साथीहरू लगायत तमाम सञ्चारकर्मी अग्रज तथा मित्रहरूको सद्भाव र आशिर्वादबाट हामी तीन महिनाको छोटो यात्रामै सफल बन्न सकेका छौँ । यसको श्रेय म तपाईहरूको मायालाई नै दिन चाहन्छु । उद्घाटनका अवसरमा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री कृपासुर शेर्पा, माननीय सभासद्हरू, लगायत सबै महानुभावहरू आइदिनु भएको थियो । म उहाँहरूप्रति हृदय ओछ्याएर कृतज्ञता प्रकट गर्दछु । आगामी दिनमा निरन्तर तपाइँहरूको सल्लाह सुझाव र माया पाइरहने विश्वास प्रकट गर्दछु ।